Horohoron-tany lehibe tany Puerto Rico: tsy misy hery
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Horohoron-tany lehibe tany Puerto Rico: tsy misy hery
Janoary 7, 2020
Ny haben'ny 6.6 horohoron-tany tsapa manerana ny nosy Puerto Rico.
Raha ny filazan'ireo nanatri-maso dia tsy manan-kery ny antsasaky ny nosy.
Midika izany fa ny mpiambina tsirairay dia nikatona teo ambanin'ny protokolony. Ny nosy iray manontolo dia tsy misy fahefana. Ity dia ilay rivodoza Maria indray Raha ny filazan'ireo nanatri-maso a fampitandremana tsunami ao seranan-tsambo Reny Rico, ary samy mihazakazaka mankeny amin'ny havoana daholo ny rehetra .. ..
Na izany aza, hoy ny USGS, dia tsy misy fandrahonana tsunami intsony ho an'ny Nosy sy ny morontsiraka atsinanana, na eo aza ny fampitam-baovao marobe momba ny fandrahonana tsunami ho an'i Puerto Rico sy ny nosy virjina amerikana.
Indios dia barrio ao amin'ny tanànan'ny Guayanilla any Puerto Rico. Vao niharan'ny horohoron-tany 6.6 ny faritra. Halalin'ny 4.3 kilaometatra amin'ny 4.24 maraina ora eo an-toerana.
I Guayanilla dia tanàna iray any Puerto Rico izay miorina amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy, manamorona ny Ranomasina Karaiba, atsimon'ny Adjuntas, atsinanan'i Yauco; ary andrefan'ny Peñuelas ary manodidina ny 12 kilaometatra andrefan'ny Ponce. Miitatra amin'ny paroasy 16 sy Guayanilla Pueblo i Guayanilla. Io dia ao amin'ny faritra Yauco Metropolitan Statistics
10 minitra taty aoriana dia nisy horohoron-tany 6.1 namely an'i Carenero Barrio.
Hoy ny bitsika iray: “Tsy misy atahorana any San Juan isika amin'izao fotoana izao - taorian'ny 6.6 horohoron-tany any Puerto Rico. Samia mivavaka. Mikiakiaka amintsika erak'izao tontolo izao ny tany. Tsy maintsy manova zavatra isika ary ho tsara fanahy kokoa amin'ny tany. Ptara ho an'i Puerto Rico ”
Mpizahatany iray nisioka hoe: “Ity no voalohany amiko horohoron-tany ary te hiala aho. ”
5.3 sy 5.2 aftershock roa no refesina tao anatin'ny 30 minitra taorian'ny 6.5. horohoron-tany.
Trano iray nianjera tao an-tanànan'i Yauco.
Tantara mandroso izany.
Olona 40 no maty, 213 naratra tamin'ny stampede fandevenana an'i Soleimani ao Iran
Iharan'ny horohoron-tany mahery i Indonezia
19 ora lasa izay
Vaovao momba ny dia any Israely
Israel dia nanambara ny drafitra fanarenana ny fizahan-tany
Sandals Resorts sy ASTA dia manambara ny fironana amin'ny dia lavitra alohan'ny hirosoan'ny fahavaratra